Ndeupi mutsauko uripo pakati pePakati pe80 nePakati pe20?
Ngatidzidzei nezvepakati pe80 (inozivikanwawo sePakati pe80 kana polysorbate 80) uye pakati pe20 (inozivikanwawo sePakati pe20) nenzira nhatu dzakasiyana 1 Synthesis yePakati pe20: musanganiswa we polyethyl ...
Kwenguva yakareba, iyo indasitiri yechigadzirwa inongwarira kwazvo nezvekushandisa kwesilicone yemukati yekuburitsa mumiririri. Izvi zvinogona kuve nezvakawanda zvine chekuita nekunzwisisa kwakasiyana uye kushandiswa kwechigadzirwa Pane zvakawanda kusanzwisisana nezveiye wekusunungura mumiririri mu silica gel Imwe. Zvemhedzisiro yepatu ...
Muna 2025, mutengo wepasirese wepasi rose wecarbomer unotarisirwa kuwedzera kusvika ku10.34 yuan
Iko musika kugona kweQingdao carbomer yakakura. Izvo zvinoonekwa kuti mumakore mashanu anotevera, kuchave nemamiriyoni gumi nemazana matatu emakumi mana emusika yuan ichagadziriswa muna 2025. Tevere, ngatiteverei zvinhu zvitsva zveQingdao yinuoxin Carbomer ndeye homopolymer yeacrylic acrylic, crosslinking kana kubatana nechero o ...
Ndeapi mashiripiti mhedzisiro ecarbomer?
Kapom iri kwese kwese muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, wakambozviona here? Nhasi tichazodzidza nezve USES yeiyi inoshamisa kapom neMutungamiri Hu kubva kuInoxon New Materials. 1. Dzivirira ganda rako Kapok rine rinooneka rekudzivirira kune yemunhu ganda, ine kumwe kubatana kune kwemunhu ganda ganda, geni ...
PEG nhevedzano pfupiso, iwe unoda kuziva here?
Peg-200: Inogona kushandiswa senge svikiro kune organic synthesis uye inotakura inotakura ine yakakwira zvinodiwa. Inogona kushandiswa seye humectant, solvent inowedzera inorganic munyu uye viscosity regulator mune yemazuva ese indasitiri yemakemikari. Inoshandiswa seye softener uye antistatic mumiriri mune yemachira indasitiri; Inoshandiswa sekunyorova ag ...
Nzwisisa zvakanakira polyethylene glycol kuita, kwekugadzira hwaro hwakanaka!
Polyethylene glycol (Peji) ndiyo polymer ye ethylene oxide nemvura. Iyo chena parafini flake kana hupfu hwakasimba, husina kana hwema husina kusimba. Iyo haina-chepfu, isinga gumbure, ine yakanaka mvura solubility, uye ine kuenderana kwakanaka nezvakawanda organic zvinhu. Ivo anoshandiswa zvakanyanya mukuzora ...